Umzila 66 welizwe elipholileyo lokuRetreat-Inobubele kwizilwanyana zasekhaya
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguCindy
Baleka esixekweni kule ndawo ipholileyo nenoxolo emathafeni. Route 66 Cozy Country Retreat inamagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-2, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, iwasha / isomisi, kunye nendawo eninzi yokuhlala yangaphandle enemibono engapheliyo yendalo.
Ukuthanda ngaphandle? Songeze iidesika ezintle ngaphambili nangasemva ukuze wonwabele ukuphuma nokutshona kwelanga.
Sinemvakalelo entle yokuba yonke into iya kuhamba ngendlela yakho kwi-Route 66 Cozy Country Retreat! Ukuhlalisa kamnandi ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-6, eli khaya liyilwe ngokonwabisa kwaye limemayo linendawo engoyiswayo ekuvumela ukuba ubalekele kuyo yonke into. Yonwabela iindawo eziqaqambileyo nezinomoya zangaphakathi, umgangatho ongemva omangalisayo kunye neyadi elungele ukonwabisa ngaphandle, kunye nokupaka kwindawo yokupaka kuyo nayiphi na isayizi yesithuthi.
IKHISHINI: Ixhotyiswe kakuhle kwaye ibandakanya ifriji/isikhenkcezisi esipheleleyo, imicrowave, uluhlu lombane kunye ne-oveni, kunye ne-cookware + nezixhobo ezifunekayo ukulungiselela ukutya okupheleleyo.
INDAWO YOKUDLA + INDAWO YOKUSEBENZA: Ifaka itafile yokutyela yabantu aba-6 enamagqabi awongeziweyo anokwenza lula umsebenzi ophindwe kabini njengendawo yokusebenzela yokuhamba ngenyani.
Igumbi lokuhlala: Isilingi evalekileyo enendawo yokubukela iTV kunye nezihlalo eziqhelekileyo. Le ndawo yokuhlangana yentlalo ifanelekile kubusuku befilimu yosapho okanye ukubamba nje nabahlobo.
AMAGUMBI okulala: Amagumbi okulala amathathu abanzi kunye nabucala alala abantu aba-6 bebonke. Onke amagumbi okulala anezibane ezisecaleni kwebhedi, amagumbi okugcina okongeziweyo, kunye negumbi lokulala eliphambili linebhafu ye-en-suite.
Izinto zethu eziluncedo ziquka:
• I-Wi-Fi, umabonwakude othe ngqo, noomabonakude beRoku kumagumbi okulala kunye negumbi lokuhlala
• Izixhobo zombane eziqhelekileyo eziquka umenzi wekofu, umatshini wokuhlamba izitya, imicrowave, itoaster, kunye neblender
• Iilineni ezintsha, iitawuli, kunye nezinto eziyimfuneko zokuhlambela zondwendwe ngalunye
• Ubungakanani obugcweleyo bokuhlamba kunye nesomisi
• I-Charcoal BBQ grill
• Idesika enkulu
• Umngxuma womlilo
Ngaba ujonge phambili kumoya omtsha, welizwe? Kunye neeyadi ezinkulu kunye nomgangatho, kukho indawo yekhonkrithi ngasemva enegriza yamalahle, itafile yepikiniki, umgodi womlilo, kunye neebhentshi. Siyavuya ukuqala umlilo kwindawo yomlilo ngenxa yakho.
5.0 · Izimvo eziyi-67
I-Kellyville, i-Oklahoma yindawo entle ukuba ube kuyo! Simi kwindawo esembindini phakathi kweTulsa kunye ne-Oklahoma City kwaye siyavuya ukunika ulwazi malunga nezinto ekufuneka zenziwe kunye neendawo zokutyela, nazi iindawo ezimbalwa ezibalaseleyo:
• Indlela yezeMbali 66
• I-Speedway yaseCreek County
• Indawo yokuHlanganisa yaseTulsa, ipaki evunyiweyo kuzwelonke nephumelele ibhaso kuMlambo iArkansas.
• Iziko le-BOK lemiboniso kunye neekonsathi
• Uvulindlela Owasetyhini Merchantile ePawhuska, Kulungile
• IGilcrease, iWollaroc, nePhilbrook Museums
• Izithili zaseDowntown Tulsa: iBlue Dome, iDeco, iTulsa Arts, iPearl, iBrookside, iGreenwood,, iSithili sokuzonwabisa, iCherry Street, kunye neZithili zeKendall Whittier
• OKC Cowboy Hall of Fame kunye Frontier City
• IZoo yaseTulsa
• Isitiya seBhotani saseTulsa
• Utica Square (ukuthenga kunye nokutya)
• Amachibi amaninzi asekuhlaleni ayafikeleleka kwindawo esikuyo
Mininzi eminye imisebenzi ekulindeleyo!
Sifumaneka njengoko kufuneka. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nendlela yokuphila yelizwe okanye izinto onokuzenza cela nje.